ဒီအတွေးတွေက သင့်ကိုကျရှုံးမှုဆီသာ ဦးတည်သွားစေမှာ… | ဒီပကျော်(နည်းပညာ)
ဒီအတွေးတွေက သင့်ကိုကျရှုံးမှုဆီသာ ဦးတည်သွားစေမှာ…
တစ်ခါတစ်လေကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပဲ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုမရှိအောင်၊စိတ်ဓာတ်ကျအောင်လုပ်မိသွားတတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုမရောက်အောင် နှောင့်ယှက်နိုင်ဆုံး အတွေးတွေပေါ့။အတွေးတွေက ဘာမှသာမဟုတ်တယ်။လုပ်ငန်းတစ်ခုမလုပ်ဖြစ်အောင်၊အလုပ်ကိစ္စပျက်ပြားအောင် ၀င်နှောင့်ယှက်တတ်ပါတယ်။သင့်မှာရော ကျရှုံးမှုတွေဆီသာ ဦးတည်သွားစေမယ့်ဒီလိုအတွေးတွေရှိနေပြီလား?
*ကိစ္စတစ်ခုခုကိုလုပ်ဖို့ ကိုယ့်အသက်အရွယ်နဲ့ဖြစ်ပါ့မလားဆိုပြီး တွန့်ဆုတ်နေတာမျိုး
ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဆိုရင်အသက်က ငယ်ငယ်ကြီးကြီး အရေးမပါတော့ပါဘူး။ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့
*တကယ်လို့ငါ့မှာ…ရှိရင် ပျော်ရွှင်ရမှာပဲလို့ တွေးမိနေတာမျိုး
တစ်ခုခုပေါ့။ဖုန်းအသစ်လေးရှိရင် ပျော်ရမှာပဲ၊ကားလေးတစ်စီးရှိရင် ပျော်ရမှာပဲဆိုတာတွေက တကယ့်ပျော်ရွှင်မှုအစစ်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါတွေပိုင်ရရင် ပျော်ရွှင်ရတာက ခဏတာပါ။ဒါကို သတိပြုမိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေမရှိလဲ ပျော်ရွှင်ရတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုအစစ်ကိုရှာဖွေပါ
လူတော်တော်များများပြောနေကျ၊တွေးနေကျအတွေးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းသူတို့မသိတာက ကိုယ့်မှာအချိန်ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲဆိုတာပါပဲ။နောက်မှလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတာထက် ချက်ချင်းလုပ်လိုက်တာက ပိုပြီးစိတ်ချရပါတယ်။
*ငါ ဘာလုပ်လုပ်အဆင်မပြေဘူး အမြဲကျရှုံးနေတာပဲ ငါကအရှုံးသမားပဲ
တစ်ခုခုလုပ်လိုက်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးစိတ်ဓာတ်ကျနေဖို့မလိုပါဘူး။ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာက အခုမဟုတ်ရင်တောင် တဖြည်းဖြည်းကြိုးစားရင်းရလာမှာပါပဲ။လက်လျှော့လိုက်စရာသာ မလိုတာပါ။
ဒီအတွေးကလည်း လူတော်တော်များများတွေးကြတဲ့အတွေးပါပဲ။တကယ်တော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အတွေးကလည်းမတူတဲ့အတွက်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်နားလည်ပေးဖို့ဆိုတာခက်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုနားလည်ပေးဖို့ အတင်းကြိုးစားပြောနေမယ့်အစား ကိုယ်နဲ့မတူညီတဲ့တစ်ခြားတစ်ယောက်ရဲ့အမြင်ကို နားထောင်ကြည့်လိုက်တာ၊သူ့ဘက်က ၀င်တွေးကြည့်လိုက်တာက ဘ၀မှာနေရထိုင်ရတာပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
မလုပ်ကြည့်ရသေးဘူး၊လက်လျှော့နေတာက ပိုပြီးကျရှုံးစေပါတယ်။အကောင်းမြင်စိတ်လေးထားပါ။သူတို့တောင်လုပ်နိုင်တာ ငါကဘာလို့မလုပ်နိုင်ရမှာလဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ပြောင်းလဲစေတာ ကိုယ်ပဲရှိပါတယ်။
ဒီလိုအတွေးတွေကို ပြောင်းလဲမပစ်ပဲ အမြဲတွေးနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ အောင်မြင်မှုထက် ကျရှုံးမှုကို အရင်ဆုံးရင်ဆိုင်ရမှာမလွဲပါဘူး။ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့အတွေးအမြင်တွေကိုဖယ်ပြီး ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းကြည့်ပါ…
တဈခါတဈလကေိုယျကိုယျတိုငျကပဲ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျယုံကွညျမှုမရှိအောငျ၊စိတျဓာတျကအြောငျလုပျမိသှားတတျပါတယျ။အထူးသဖွငျ့ အောငျမွငျမှုပနျးတိုငျကိုမရောကျအောငျ နှောငျ့ယှကျနိုငျဆုံး အတှေးတှပေေါ့။အတှေးတှကေ ဘာမှသာမဟုတျတယျ။လုပျငနျးတဈခုမလုပျဖွဈအောငျ၊အလုပျကိစ်စပကျြပွားအောငျ ဝငျနှောငျ့ယှကျတတျပါတယျ။သငျ့မှာရော ကရြှုံးမှုတှဆေီသာ ဦးတညျသှားစမေယျ့ဒီလိုအတှေးတှရှေိနပွေီလား?
*ကိစ်စတဈခုခုကိုလုပျဖို့ ကိုယျ့အသကျအရှယျနဲ့ဖွဈပါ့မလားဆိုပွီး တှနျ့ဆုတျနတောမြိုး
ကိုယျ့ရဲ့အလိုဆန်ဒတှကေိုဖွညျ့ဆညျးဖို့ဆိုရငျအသကျက ငယျငယျကွီးကွီး အရေးမပါတော့ပါဘူး။ဒါကိုမမပေ့ါနဲ့
*တကယျလို့ငါ့မှာ…ရှိရငျ ပြျောရှငျရမှာပဲလို့ တှေးမိနတောမြိုး
တဈခုခုပေါ့။ဖုနျးအသဈလေးရှိရငျ ပြျောရမှာပဲ၊ကားလေးတဈစီးရှိရငျ ပြျောရမှာပဲဆိုတာတှကေ တကယျ့ပြျောရှငျမှုအစဈမဟုတျပါဘူး။အဲ့ဒါတှပေိုငျရရငျ ပြျောရှငျရတာက ခဏတာပါ။ဒါကို သတိပွုမိဖို့လိုပါတယျ။အဲ့ဒီအရာတှမေရှိလဲ ပြျောရှငျရတဲ့ ပြျောရှငျမှုအစဈကိုရှာဖှပေါ
လူတျောတျောမြားမြားပွောနကြေ၊တှေးနကေအြတှေးပါပဲ။ဒါပမေဲ့ တကယျတမျးသူတို့မသိတာက ကိုယျ့မှာအခြိနျဘယျလောကျကနျြသေးလဲဆိုတာပါပဲ။နောကျမှလုပျလိုကျမယျဆိုတာထကျ ခကျြခငျြးလုပျလိုကျတာက ပိုပွီးစိတျခရြပါတယျ။
*ငါ ဘာလုပျလုပျအဆငျမပွဘေူး အမွဲကရြှုံးနတောပဲ ငါကအရှုံးသမားပဲ
တဈခုခုလုပျလိုကျလို့အဆငျမပွဘေူးဆိုပွီးစိတျဓာတျကနြဖေို့မလိုပါဘူး။ကိုယျလိုခငျြတဲ့အရာက အခုမဟုတျရငျတောငျ တဖွညျးဖွညျးကွိုးစားရငျးရလာမှာပါပဲ။လကျလြှော့လိုကျစရာသာ မလိုတာပါ။
ဒီအတှေးကလညျး လူတျောတျောမြားမြားတှေးကွတဲ့အတှေးပါပဲ။တကယျတော့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အတှေးကလညျးမတူတဲ့အတှကျတဈယောကျကိုတဈယောကျနားလညျပေးဖို့ဆိုတာခကျပါတယျ။ကိုယျ့ကိုနားလညျပေးဖို့ အတငျးကွိုးစားပွောနမေယျ့အစား ကိုယျနဲ့မတူညီတဲ့တဈခွားတဈယောကျရဲ့အမွငျကို နားထောငျကွညျ့လိုကျတာ၊သူ့ဘကျက ဝငျတှေးကွညျ့လိုကျတာက ဘဝမှာနရေထိုငျရတာပိုအဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။
မလုပျကွညျ့ရသေးဘူး၊လကျလြှော့နတောက ပိုပွီးကရြှုံးစပေါတယျ။အကောငျးမွငျစိတျလေးထားပါ။သူတို့တောငျလုပျနိုငျတာ ငါကဘာလို့မလုပျနိုငျရမှာလဲဆိုတဲ့အတှေးနဲ့ ကွိုးစားကွညျ့ပါ။ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျပွောငျးလဲစတော ကိုယျပဲရှိပါတယျ။
ဒီလိုအတှေးတှကေို ပွောငျးလဲမပဈပဲ အမွဲတှေးနဦေးမယျဆိုရငျတော့ အောငျမွငျမှုထကျ ကရြှုံးမှုကို အရငျဆုံးရငျဆိုငျရမှာမလှဲပါဘူး။ဒါကွောငျ့မကောငျးတဲ့အတှေးအမွငျတှကေိုဖယျပွီး ဘဝကိုဖွတျသနျးကွညျ့ပါ…
Previous Postသာယာလှပတဲ့ သဘာဝတရားနဲ့ ဝန်းရံနေတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ပိုမိုသက်ရှည်ကျန်းမာနိုင်Next Postဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လန်ဒန်မြို့တော် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ရုပ်သိမ်းဖို့ ဆုံးဖြတ်